ဂယျရီ နဗီးလျ ခနျ့မှနျးလိုကျတဲ့ ယူရိုပါလိဂျဗိုလျလုပှဲ ပှဲထှကျလူစာရငျး – the One Sports Journal
ဂယျရီ နဗီးလျက ဖူလျဟမျ အသငျးနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျအတှကျ အိုလေ ဂနျးနား ဆိုးရှား ရှေးခယျြခဲ့တဲ့ ပှဲထှကျကစားသမားစာရငျးကို ဗီလာရီးရဲအသငျးနဲ့ ယူရိုပါလိဂျဗိုလျလုပှဲမှာပါ ထပျမံအသုံးပွုမယျလို့ ခနျ့မှနျးလိုကျပါတယျ။
မနျယူနိုကျတကျက အိုးထရတျဖို့ဒျမှာ ဖူလျဟမျအသငျးကို လကျခံကစားခဲ့ပွီး ဒီရာသီမှာ ပထမဆုံးအကွိမျပရိသတျ ( ၁ ) သောငျး ဝငျ‌ရောကျကွညျ့ရှုခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။
အကျဒီဆငျ ကာဗာနီက ပှဲကစားခြိနျ မိနဈ ( ၂၀ ) မတိုငျမီ ယူနိုကျတကျအတှကျ အဖှငျ့ဂိုးသှငျးယူခဲ့ပါတယျ။
ယူနိုကျတကျအနနေဲ့ ယခုပှဲစဉျ အနိုငျရရှိပါက ရာသီမကုနျခငျ အဆငျ့ ( ၂ ) နရောကို သိမျးပိုကျနိုငျမှာဖွဈပွီး ယူရိုပါလိဂျဗိုလျလုပှဲကို အာရုံစိုကျနိုငျမှာဖွဈပမေယျ့ ခပြေဂိုးပေးခဲ့ရပွီး ( ၁-၁) သရရေလာဒျထှကျပျေါခဲ့ပါတယျ။
နဗီးလျက ဖူလျဟမျအသငျးနဲ့ ပှဲစဉျမှာ အသုံးပွုခဲ့တဲ့ ပှဲထှကျစားသမားစာရငျးကို ဗီလာရီးရဲအသငျးနဲ့ ဗိုလျလုပှဲမှာပါ ထပျမံအသုံးပွုသှားမယျလို့ ယုံကွညျနပေါတယျ။
နဗီးလျက Sky Sports နဲ့တှဆေုံ့ရာမှာ “ တကယျလို့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအနနေဲ့ ယူရိုပါလိဂျဗိုလျလုပှဲမှာ ဒီလူစာရငျးကို အသုံးပွုမယျဆိုရငျ အံ့သွမိမှာ မဟုတျပါဘူး။” လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
“ ဒါက ကြှနျတေျာ့ကို အံ့သွစမှော မဟုတျပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရကျဖို့ဒျက ညာခွမျးမှာ အလုပျမဖွဈလို့ပါ ။
ထိပျမှာတော့ ကာဗာနီကစားပွီး ကှငျးလယျ ( ၃ ) ဦးကတော့ ရှေးခယျြပွီးဖွဈပါလိမျ့မယျ။”
“ အိုလေ ဂနျးနား ဆိုးရှားက ဗဟိုခံစဈကစားသမားနရောမှာ ဗဈတာ လငျဒီလော့နှငျ့ ဟယျရီ မကျဂှဲယားအစား ထရနျဇီဘီကို အသုံးပွုမယျလို့ထငျပါတယျ။
သူဝနျမခံသေးပမေယျ့ ဒါက ဗိုလျလုပှဲမှာ အသုံးပွုမယျ့အသငျးလို့ ထငျပါတယျ။”
“ ဂိုးသမားနရောမှာတော့ ဒီဂီယာ ပှဲထှကျခှငျ့ရပါလိမျ့မယျ။
ဂရငျးဝုဒျက ညာခွမျးမှာ ကစားပါလိမျ့မယျ။ ရကျဖို့ဒျက ညာဘကျမှာ အလုပျမဖွဈပါဘူး။
ရကျဖို့ဒျနဲ့ ပတျသကျလို့ စိုးရိမျမိပါတယျ။
သူ့ကို ခနျြထားမှာလား ? ပေါ့ဘာကို ခနျြထားမယျလို့တော့ မထငျပါဘူး။”
ဂယ်ရီ နဗီးလ် ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲ ပွဲထွက်လူစာရင်း
ဂယ်ရီ နဗီးလ်က ဖူလ်ဟမ် အသင်းနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်အတွက် အိုလေ ဂန်းနား ဆိုးရှား ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ပွဲထွက်ကစားသမားစာရင်းကို ဗီလာရီးရဲအသင်းနဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာပါ ထပ်မံအသုံးပြုမယ်လို့ ခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။
မန်ယူနိုက်တက်က အိုးထရတ်ဖို့ဒ်မှာ ဖူလ်ဟမ်အသင်းကို လက်ခံကစားခဲ့ပြီး ဒီရာသီမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ပရိသတ် ( ၁ ) သောင်း ဝင်‌ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
အက်ဒီဆင် ကာဗာနီက ပွဲကစားချိန် မိနစ် ( ၂၀ ) မတိုင်မီ ယူနိုက်တက်အတွက် အဖွင့်ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ယခုပွဲစဉ် အနိုင်ရရှိပါက ရာသီမကုန်ခင် အဆင့် ( ၂ ) နေရာကို သိမ်းပိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ယူရိုပါလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲကို အာရုံစိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် ချေပဂိုးပေးခဲ့ရပြီး ( ၁-၁) သရေရလာဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
နဗီးလ်က ဖူလ်ဟမ်အသင်းနဲ့ ပွဲစဉ်မှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ပွဲထွက်စားသမားစာရင်းကို ဗီလာရီးရဲအသင်းနဲ့ ဗိုလ်လုပွဲမှာပါ ထပ်မံအသုံးပြုသွားမယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။
နဗီးလ်က Sky Sports နဲ့တွေ့ဆုံရာမှာ “ တကယ်လို့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ ဒီလူစာရင်းကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အံ့သြမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ ဒါက ကျွန်တော့်ကို အံ့သြစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရက်ဖို့ဒ်က ညာခြမ်းမှာ အလုပ်မဖြစ်လို့ပါ ။
ထိပ်မှာတော့ ကာဗာနီကစားပြီး ကွင်းလယ် ( ၃ ) ဦးကတော့ ရွေးချယ်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။”
“ အိုလေ ဂန်းနား ဆိုးရှားက ဗဟိုခံစစ်ကစားသမားနေရာမှာ ဗစ်တာ လင်ဒီလော့နှင့် ဟယ်ရီ မက်ဂွဲယားအစား ထရန်ဇီဘီကို အသုံးပြုမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
သူဝန်မခံသေးပေမယ့် ဒါက ဗိုလ်လုပွဲမှာ အသုံးပြုမယ့်အသင်းလို့ ထင်ပါတယ်။”
“ ဂိုးသမားနေရာမှာတော့ ဒီဂီယာ ပွဲထွက်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ်။
ဂရင်းဝုဒ်က ညာခြမ်းမှာ ကစားပါလိမ့်မယ်။ ရက်ဖို့ဒ်က ညာဘက်မှာ အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။
ရက်ဖို့ဒ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်မိပါတယ်။
သူ့ကို ချန်ထားမှာလား ? ပေါ့ဘာကို ချန်ထားမယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး။”